Trump sy Kim dia manaiky ny fizahan-tany any Singapore: Shangri La Hotel, St. Regis ary Capella Resort no nandresy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Korea Avaratra » Trump sy Kim dia manaiky ny fizahan-tany any Singapore: Shangri La Hotel, St. Regis ary Capella Resort no nandresy
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • People • Vaovao Mafana Singaporeana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Andro tsara ho an'izao tontolo izao androany, ary andro tsara kokoa ho an'ny fizahan-tany any Singapore miaraka amin'ny fankatoavana manokana mankany amin'ny Shangri La Hotel, St. Regis ary Capella Resort any Singapore.
I Donald Trump dia namela ny korontana tao an-tanàna tao aoriany rehefa nanamarina ny efitrano filoham-pirenena tao amin'ny hotely Shangri La any Singapore omaly alina. Eo afovoan'ny maitso maitso 15 hektara, Shangri-La Hotel, Singapore, dia toerana tsy misy toa an'io. Fantatra amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny tsara indrindra eran-tany, eto no nanomboka ny fandraisam-bahiny aziatika malaza any Shangri-La
Ny torolàlana Kim Jong-un dia nahita torimaso naharitra alina tao amin'ny St. Regis Hotel Singapore. Ity trano fandraisam-bahiny mirary trano ity dia toeram-pivarotana sy fivarotana lehibe mihoatra ny 25, ary nivoaka i Kim halina mba hahatsapa fomba fiaina andrefana sy safidy fiantsenana, very be any amin'ny fireneny.
Rehefa nivoaka ny vaovao fa hijanona ao amin'ny Hotely St Regis Hotel ny mpitarika Koreana Tavaratra Kim Jong Un, nihevitra ny mpitantana ny fiaraha-miasan'ny Starbucks teo akaiky teo fa ny andiana mpanao gazety mitoby any dia midika asa tsara. Raha nilaza ny mpitantana fa “be dia be” ny mpanao gazety no niaro ny toeram-pivarotana tao Tanglin Mall talohan'ny fihaonambe Trump-Kim tamin'ny talata, tsy dia lehibe araka ny nantenainy izany. Na izany aza, mpanao gazety maherin'ny 2,500 no any Singapour amin'ny fihaonana an-tampony.
Trump sy Kim dia niara-nivory androany tao amin'ny Capella Resort any Retosa.
Nampiroborobo i Sentosa ho toeram-pialan-tsasatra malaza any Azia ary fialan-tsasatry ny fialan-tsasatry ny nosy voalohany any Singapour, hita ao anatin'ny 15 minitra avy amin'ny distrikan'ny orinasa sy ny varotra.
Ny nosy fialantsasatra dia tantanan'ny Sentosa Development Corporation, izay miara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hanaraha-maso ny fampiasam-bola amin'ny fananana, ny fampandrosoana ny fisarihana, ny fiasa amin'ny fanomezana fialam-boly isan-karazany ary ny fitantanana ny faritry ny fonenana ao amin'ny nosy. Ny Corporation dia manana ihany koa ny Mount Faber Leisure Group izay mitantana ny serivisy fitaterana tariby tokana any Singapour.
Slides sy fihaonana mahafinaritra amin'ny fiainana an-dranomasina - amin'ny toerana iray rehetra ao amin'ny nosy Retosa.
Capella Resort any Retosa dia toeram-pialantsasatra mahafinaritra ary fantatra amin'ny endrika mpanjanatany sy ny endriny Azia ankehitriny. Capella Singapore no nametraka ny dingana anio sy ny feon'ny fifampiraharahana manan-tantara teo amin'ny mpitarika Korea Avaratra Kim Jong Un sy ny filoham-pirenena Donald Trump.
Ny orinasa mpanao mari-trano monina any Londres Foster + Partners dia namerina nametraka ny tranon'ny mpanjanatany namboarina ho an'ny tafika britanika tamin'ny taona 1880 miaraka amina endrika aziatika ankehitriny mba hamoronana toeram-pialan-tsasatra maoderina manan-tantara miaraka amina spa, golf ary dobo tsara tarehy eo afovoan'ny ala mando amin'ny 30 hektara. tany.
The Capella Resort, Singapore dia toeram-pialamboly lafo vidy ao amin'ny tokotany sy zaridaina 30 hektara izay misy eo amin'ny Nosy Sentosa, Singapore. Izy io dia manana trano sy efitrano 112 ary efitrano fandraisam-bahiny noforonin'i Norman Foster.
Ho manan-tantara ny fihaonana an-tampony anio ary i Singapore no fizahan-tany any Singapour izay vao nahazo fampiroboroboana PR lehibe indrindra tamin'ny tantara maoderina.
Ny resabe manodidina ny fihaonana an-tampon'ny Trump-Kim tamin'ny Talata dia nanetsika ny fanahin'ny mpandraharaha Singaporeana ary nanangana fanantenana ny fizara-pizahan-tany fizahan-tany, fotoana ela taorian'ny nipetrahan'ny vovoka an-tampon'ny tampon'ny tampon'isa.
Olona iray no manandrana mivarotra ny famandrihany amin'ny faran'ny herinandro ao amin'ny Hotel Shangri-La, voatonona tamin'ny haino aman-jery fa mety hipetrahan'ny iray amin'ireo mpitarika - amin'ny vidiny telo heny.
Tongasoa eto Singapore!